नेपाली राजनीतिका भीमबहादुरहरु - Sankalpa Khabar
1. आयोग पदाधिकारीपछि कांग्रेसमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री देउवा,यस्ता छन् एजेन्डाहरु
2. अनुमतिबिना तस्बिर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गरेमा कारबाही
3. राष्ट्रियसभा चुनावमा अन्तर्घात गर्नेलाई एमालेले कारबाही गर्ने
4. प्रधानमन्त्रीले बोलाए पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक
5. भिजिट भिसामा दुबई पुर्‍याएर अलपत्र पार्नेलाई कुनै हालतमा छोड्दैन : श्रममन्त्री श्रेष्ठ
6. अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडले मार्चमा औसत ब्याजदर वृद्धि गर्ने
नेपाली राजनीतिका भीमबहादुरहरु
१६ मंसिर ०७:३०
अधिकांश राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टीले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक दस्तावेजमा अति आदर र सम्मानका साथ स्वीकार गरेका राजनीतिक व्यक्तित्व नेपाली कांग्रेसका नेता स्व. भीमबहादुर तामाङ असल नेताको रुपमा सुपरिचित नाम हो । उहाँको नाम सबैले लिने गर्छन् र काम चाहिँ गर्न तयार हुँदैनन । त्यो व्यक्तित्वलाई आ–आफ्नो किसिमले बुझ्ने कुरा स्वभाविक नै भए पनि राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको दृष्टिकोणले एउटा साधारण व्यक्ति भएर असाधारण व्यक्तित्व निर्माण हुनसक्छ भन्ने चेतना विकास र सञ्चार गर्न सिंगो नेपाली राजनीति असफल भएको छ । भीमबहादुर तामाङ र उहाँजस्ता धेरै राजनीतिकर्मीहरु जसले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ऐतिहासिक र निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका छन्, उनीहरुलाई सम्झने सम्मान गर्ने तथा राजनीतिक जीवनमा उतार्ने सन्दर्भमा पनि नेपाली राजनीति बेखबर छ । सत्ता र शक्तिमा आबद्ध र अव्यस्त भएपछि जिम्मेवारी निर्वाहा ज्यादै गौण विषय बन्दो रहेछ भन्ने अनेकौं दृष्टानतहरु मधये परिवर्तनका लागि प्राण उत्सर्ग गरेका र त्यसको प्राप्तिका निम्ति त्याग, तपस्या र योगदान पु-याएका व्यक्तित्वहरुप्रति कठोर बननु पनि एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण बनेको छ ।
संयोगले कांग्रेसका नेता भीमबहादुर तामाङकै थाँतथलोमा हुर्किने, बढ्ने र केही सिक्ने बुझ्ने परिवेशमा गर्न गएको प्रभाव र उहाँप्रतिको आस्था विश्वास र सम्मानलाई अभिव्यक्त गर्ने प्रयोजनका निम्ति नै भए पनि स्मरणमा अनगिन्ती घटनाक्रम आउँछन् । व्यक्ति, व्यक्तित्व, परिस्थिति र परिवेशको तुलनात्मक अध्ययन र विश्लेषण हुनसक्छ । परिवर्तनका लागि धेरै कुरा त्याग गरेका तामाङजस्ता व्यक्तिहरुले परिकल्पना गरेको राजनीतिक आधार निर्माण हुँदै गएको छ वा ठीक उल्टो दिशातर्फ उन्मुख भएको छ ? यसको पनि समीक्षा नेपाली समाजले खोजेको हुनुपर्छ । स्वर्गीय तामाङलाई बुझेको समाज र त्यो समाजका हामी सदस्यहरुले यस्तो राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको परिकल्पना गरेका थिएनौं । भ्रष्ट र अराजक समाज निर्माणतर्फको यात्राले कतै हामीलाई दुर्घटनातर्फ त डो¥याइरहेको छैन ? तामाङजस्ता त्यागी, सादगी र साधारण नेताले बनाएको पार्टी नेपाली कांग्रेस त्यही बाटोमा छ वा बाटो नै छोडेको छ ? यस कुराको समीक्षा, विश्लेषण र छलफल पार्टीको चौधौं महाधिवेशनमा गरिदैछ वा छैन ? त्यसको आवश्यकता महसुस गर्ने, कांग्रेसको विचार र सिद्धान्तलाई बुझ्ने र बोक्ने मानिस आज कति प्रतिशत तल्लो तहबाट निर्वाचित भएर आए ? कि अधिकांश ठाउँमा पाखा लगाइयो ? यसको उचित हिसाब नेपालको राजनीतिक इतिहासले खोज्छ नै ।
म आफैले बुझ्ने जान्ने भएदेखि राजनीतिमा देखिएका पात्रहरुको लेखाजोखा गरेको छु । स्व. तामाङ हुँदासम्म जे जस्ता पात्रहरु राजनीतिमा आउने हिम्मत नै गर्दैनथे अहिले तिनीहरु निर्णायक मात्र होइन नेतृत्वमा नै आए । आफ्नो आनीबानी र व्यवहारमा परिवर्तन गर्न नचाहनेहरुले प्राप्त गरेको नेतृत्वदायी भूमिकाका आधारमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन ? त्यसको सम्भावना कति छ भन्ने सामान्य हेक्का राख्ने काम भएन । मूल नेतृत्वले पनि असफल होइन, खराबको आवश्यकता महसुस गरेको अनुभूति हुन्छ । राम्रो होइन, हाम्रो, असल नभएर खराब मानिसको प्रवेश जोडतोडका साथ भएको देखिन्छ । राजनीति गर्ने मानिस सरल र साधारण हुन सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्ने तामाङजस्ता नेताहरु नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा तल्लो तहबाटै पराजित भएको देखिन्छ । नेतृत्वमा भएका व्यक्तिहरुले गुट बनाउँदा र आफ्नो बफादार मान्छे रुचाउँदा पार्टीका इमानदार र पुराना सिद्धान्तप्रति निष्ठा राख्ने र विचारको राजनीति गर्ने मान्छेले राजनीतिक स्पेस नै नपाउने डर लाग्दो परिस्थिति बनाइदैछ ।
जातीय राजनीतिले स्वरुप ग्रहण गर्न थालेको समयमा नेपाली कांग्रेसले तामाङकै संयोजकत्वमा समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनको एउटा अशं ज्यादै चर्चामा आयो । उक्त चर्चित बाक्य थियो, ‘पहिचान भेटिने, द्वन्द्व मेटिने’ । तामाङको संयोजनमा तयार भएको उक्त प्रतिवेदन आज पनि सान्दर्भिक छ । तर, त्यसको सान्दर्भिकता कागजमा मात्र सीमित गरिएको छ । त्यसको अर्थ र आवश्यकता बुझाउने काम भएको छैन । त्यसलाई उधृत गर्नेहरुले पनि व्यवहारमा देखाउन सकेको छैनन् । कांग्रेस अधिवेशनका विभिन्न चरणहरुमा देखिएको भिन्न भिन्न किसिमको समीकरण, दिइएको नारा र प्रस्तुत भएको शैलीले जुन लक्ष्य र उद्देश्यका साथ नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि पार्टीभित्र जे जस्ता विषयमा अधययन र छलफल गराएको थियो, त्यसमा गम्भीर भएर तदनुरुपको नीति र कार्यक्रम बनाउने र नेतृत्व चयन गर्नेतर्फ प्रयास नै भएन । यी र यस्ता अनेकौ घटना, विषय र सन्दर्भ हेर्दा हामीजस्ता तामाङको राजनीतिक जीवनबाट प्रभावित मानिसहरु अगाडिको बाटो ठीक छ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । हामीले के प्राप्तिका लागि आफूलाई राजनीतिमा समर्पित गरेका हौ भन्ने हेक्कासमेत राख्न नसक्ने जमात बलशाली भएर आएको छ । सत्ता, स्वार्थ र लुटको आकर्षण देखिन्छ । राजनीति गर्ने मानिसको जीवनशैली हेरेर यो राज्यलाई खोक्रो बनाएर मोजमस्ती गर्ने, महँगो जीवन बिताउने र आफूलाई सबैभन्दा उन्नत मानिस हुँ भन्ने देखाउने पेशा रहेछ भन्ने बुझ्ने थालिएको छ ।
स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघसम्ममा नै त्यस्तै प्रवेत्ति हामी भएको छ । पत्याएका र हिजो त्याग नै गरेका नेताहरुले पनि आफ्नो स्वार्थको लागि व्यक्तिगत मानिस बनाए । व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न तयस्तै मानिसको लर्को नेताहरुको घरआगानमा देखिन्छ । योग्यता पु-याउन कि पैसा प्रशस्त बनाउनु प-यो कि पाखुरा बलियो चाहियो कि त नातागोता र परिवारको हुनुप-यो । यस्तो परिवर्तनको पक्षमा स्व. तामाङ हुनुहुन्थ्यो । उहाँ साच्चै सामाजिक रुपानतरणका निम्ति निरन्तर संघर्षशील हुनुहुन्थ्यो । त्यसका निम्ति पार्टीभित्र र बाहिर लागिरहनु हुन्थ्यो । हामीले पनि त्यही सिक्यौं, बुझियो र लागियौं तर त्यसले किनाराकृत पो ग¥यो ।
कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनको क्रमा पुराना, इमान्दार र निष्ठावान व्यक्तिहरु जसले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा असाधारण योगदान पु-याएका छन्, उनीहरु तल्लो तहकै अधिवेशनमा पराजित भए । उनीहरुले यथेष्ठ पैसा खर्च गर्न सकेनन्, नेतृत्वको चाकरी गरेनन, खुवाउने, पिलाउने काम गरेनन्, नीति, सिद्धान्त, विचार र निष्ठाको राजनीति गरे । त्यसकै निम्ति सम्पूर्ण कुरा त्याग गरेका पनि थिए । तर आज हिजोको निष्ठापूर्ण आन्दोलनको अर्थ नबुझेर तयस्ता पात्रहरुलाई तल्लो तहबाटै अलग्याउने काम भयो । अर्कै लक्ष्य र उद्देश्यका साथ राजनीतिमा आएको वर्गले वास्तविक राजनीतिलाई विस्थापित गर्दैछ । स्वार्थ, भागवण्डा र लेनदेनको स्वार्थी र जालझेलपूर्ण संकीर्ण राजनीति चल्दैछ । जसले व्यवस्था र अवस्थामा परिवर्तन आउँदैन । तामाङ यस्तो पक्षमा थिएनन् ।
सर्वदलीय बैठक अनिश्चित, त्यसअघि विज्ञसँग परामर्श गरिने
८ माघ १०:३८
गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्छ : महामन्त्री शर्मा
८ माघ १०:३१
प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै
७ माघ ११:२६
कांग्रेस कार्यालयमा मुख्यसचिव पद रिक्त
१३ माघ १२:०१
प्रदेश १ बाट नेकपा एसकी उपाध्यक्ष जयन्ती राई विजयी
१२ माघ १६:५७
एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन हुन्छ, तयार भएर बस्नुस्
७ माघ १६:५०
कोरोना संक्रमित एमाले अध्यक्ष ओली सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी
१३ माघ २३:३६
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : लुम्बिनीमा कुन दलको कस्तो अवस्था…
१० माघ १७:१३
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनः लुम्बिनीमा मतगणना सुरु
१२ माघ १५:४६
थप ८ हजार १७ संक्रमित थपिए, १५ जनाको मृत्यु
१३ माघ १६:३०
पोर्चुगलमा एक नेपाली युवाले गरे आत्महत्या
१४ माघ ०८:२६
कान्जी हाउसका गाई–गोरु छाड्दा बाली नोक्सान
१४ माघ ०८:२५
प्रधानन्यायाधीशले दाेस्राे पटक बाेलाए न्याय सेवा आयाेगकाे बैठक
१४ माघ ०८:२४
जडिबुटी कम्पनीकाे महाप्रबन्धकमा दरखास्त खुल्याे, व्यवसायिक कार्ययाेजना पनि पेश…
१४ माघ ०८:२३
विपन्न कृषकलाई अनुदानमा दुधालु गाई वितरण
१४ माघ ०८:०२